Injifannoo fi Oduu adda addaa – Adoolessa 29, 2020 – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooInjifannoo fi Oduu adda addaa – Adoolessa 29, 2020
Injifannoo fi Oduu adda addaa – Adoolessa 29, 2020
WBO konyaa Lixaa Ona Laaloo Assaabii keessa socho’u guyyaa har’aa adoolessa 29/2020 bakka Haallee Huwwaa jedhamutti loltoota kolonel Abiyoot irratti fudhateen nanoota 22 du’aan adabeera.
Onuma kana bakka dongoroo jedhamutti halkan edaa jechuun adoolessa 28/2020 Humna Addaa Oromiyaa warra jedhaman keessaa darabeen kaambii/mooraa isaanii eeguu kan isaa kan ta’e kilaashii 5fi kophii 3 baasuun gara WBO tti nagaan makameera! Ijifannoo dabalataan magaalaa Innaangoorraan namoonni sadii hidhannoo waliin gara WBOtti makamaniiru qawwee Oromoo bakka inni barbaachisutti guuruun itti fufa IUOF
Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo Z.Lixaa guyyaa Har’aa Lixaa Wallaggaa #Ona_Laaloo_Assaabii_Ganda Bakka addaa #Aallee_Owwaatti Waraana PP Lafoon sakattaa WBOf yaatu guutummaa guutuutti daaraa godheera. Dabalataan Eeda galgala ammoo achumatti Waraaanni Bilxiginnaa tokko Meeshaa #Kilaashii (#Ak_45) #shan (#5)f Hidhannoo sadii qabachuun obboloota isaa WBOtti dabalameera.
ONA #LAALOO #ASSAABII
Guyyaa har’aa naannoo sa’aa 1:00PM ammaa Humna addaa
jettee kan of waamtu waraanni Bilxiginnaa akka isheen WBO
sakatta’uuf bobbaate sababaa eda galgala Humni addaa
tokko kan ” Ani qomoo kootti hin dhukaasu” jedhee kilaashii 7
utuu warri kaan raftuu jalaa fuudhee WBO tti dabalamnaan
isa barbaachaaf guyyaa har’aa nama 24 taatee dhaqxee
keessaa WBOn 21 daaraa botoroo godhee 3 immoo
lubbuudhaan baqatree jalaa baate. Bakki isaa Onuma Laaloo
Assaabii sana jalaa iddoo #Haallee jedhamutti dha. Itti
muddi WBO yaa gooftaa diinaa!
### Injifannoo ZOONII KIBBAA
##Godiina Gujii Baha
Irree fi gachaanni ummaata oromoo WBO ZOONII KIBBAA GODINAA GUJII BAHA keessaa sochoo’u waraana fashiisti garee maafi’a Ethiopia sakaatta wbo deemtuu irratti guyyaa 26/07/2020 fi 27//07/2020 tarkaanfi fudhaaten injifaanno galmeesse jira.
#Guyyaa 26/07/2020 Aanaa Gooroo Adoolaa Ganda Dhuqqoo tarkaanfii fudhaaten 2 ajjeese 1 madeesse jira.
#Guyyaa 27/07/2020 Aanaa Gooroo Adoolaa Ganda Raaroo bakka adda saggoo jedhaamuti guyyaa sa’ati 4 irratti tarkaanfi fudhaaten 3 ajjeesun 2 madoo tasiisun gargaar facaase galchee jira.
#Guyyaa 27/07/2020 Aanaa Gooroo Adoolaa magaala Harqalloo kaampii poliisaa irratti tarkaanfii fudhaaten kampii keessa baqattee baddee jirtii.
Injifannoon Ummaata Oromoof!!!!!
Sirna Bulguu (Neftenya System, Abiy is guided by)
Seife Nebelbal: Declaration of Amhara on Oromo and Tigre